Yarn, zvinhu zvenaironi, Polyester, DTY-Zhejiang Leinuo Textile Technology Co, Ltd.
Kuseri kwese kwechigadzirwa chakabudirira, inomira yakagadzirwa yakavimbika. Vatengi vakavimbika vanokoshesa kunyatsonzwisisa kwedu kwezvinangwa zvavo zvekutengesa uye maitiro ekusangana nazvo, nepo vatengi vatsva vachigona kuvimbiswa neruzivo rwedu uye dhiraivha yedu yekukubatsira kuti ubudirire.
Service yakazara, imwe-kumira, kukupa iwe mhinduro yakanyanya kunaka, kukupa zano repamusoro, mushure-yekutengesa kuchengetedza, maererano nezvaunoda, kupa huwandu hukuru hwezvigadzirwa zvakasvibirira uye pasuo nesuo kutakura.
30 Mazuva Mari Kudzoka
Yakakwana mushure-yekutengesa basa
Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd. (inozivikanwa zvakare saZhuji Zhengdao Chemical Fiber Co. Ltd.) yakavambwa munaNovember 2003 .Isu tiri kunyanya kuita mukugadzira uye kutengesa kwe （Pa6 / Pa66 / Pet） FDY, POY, DTY, akafukidza mutsvuku, Rubber Yakavharwa yarn, Cotton yarn, uye upe zvemhando yepamusoro zvigadzirwa zvemarudzi ese emicheka.
Iyo kambani inofukidza nharaunda ye 12,862.20 mativi mativi uye nzvimbo yekuvaka ye 38,064.47 metres mita.More than 10 makore ekugadzirwa uye ruzivo rwebasa, nyanzvi yekugadzira tekinoroji ...
Nhoroondo yeKambani ( makore )
Dhirowa mameseji yerudzi Yakavharwa yarn Rubber Yakavharwa yarn LYCRA Yakakwira Elastic Yarn Copy Nylon Yarn Fully Drawn Yarn / FDY Yira Kune Mashizha Yira Ye underwear Yira Yeni Mucheka Ranga Kune Towel Yara Yehangu Yarn Ye Embroidery Yarn Yese Kusona Kubatanidza Yira Kune Masokisi
7070 Spandex Yakafukidzwa Yarn
SCY yeMasiki Kugadzirwa
Ine bulky uye yakazara
Rudzi rwacho runotsvedza
Kwakawanda kuwanda uye elasticity
Kugadzira machira ane elastic
Tsvina yakafukidzwa yarn
Nzvimbo yakachengeteka uye yakachena, yakarongedzwa uye yakarongeka muhodha,
ndiyo vimbiso yekunyatsoshanda uye kutumira kunze kwenyika.
Kuchengetedza chengetedzo, dziviriro yakakwana yemoto
matanho ekuona kuchengetedzeka kwevashandi neyekutakura zvinhu.
Kwemakore, yakavakirwa mukati
Zhejiang, Jiangsu, Kutarisana, Jilin, Taiwa
uye humwe humusika hukuru nemisika yemachira.
Yatengeswa yose pamusoro penyika uye yatengeswa
nedzimwe nyika nematunhu.
Unhu hwakanaka hunogona kuderedza kurasikirwa panguva yekugadzira
Kugadzirwa kwakanyanya kunoona kukurumidza kuburitsa
Kugona kuongorora uye kugadzira zvigadzirwa zvitsva nevatengi
Yakanakisa kunaka kwekutonga kugona uye kusimba
Yakakwana kugadzirwa uye kutengesa ruzivo
Strong haisi kuzodzokera
Iko kukosha kwekugadzira kuri kushoma 13 matani eDTY uye
8.5 matani akafukidzwa yarn pazuva.Neat uye yakachena musangano
nharaunda chinhu chinodiwa pakugadzirwa kwakanaka,
kuderedza tsvina uye kupfeka, kurongeka uye kurongeka kwemaitiro
yemuchina, kuitira kuti uwedzere kuwanda kwekushandiswa.
Isu tinochengeta R & D ( kutsvagiridza nekusimudzira)
inotungamira chikamu munharaunda, uye unakirwe nemukurumbira wakanaka.
70 muzana yevashandi vedu vane zvinopfuura
5 makore anoshanda ruzivo. Vakapfuma vane ruzivo
uye kushanda kwenyanzvi, kukonzera kurasikirwa kwakaderera uye
Kupfekedza kupedzisa inzira yekupedzisa uye yekugadzirisa umo mune imwe kana akawanda materu emakoriyumu akasunganidzwa zvakaenzana akasungirwa pamusoro pemucheka mafirimu uye akaonda mafirimu anoumbwa pamucheka wejira kuburikidza nekubatanidza.Coating kupedzisa ... MAONERO MORE
Chii chinoshanda machira mushure mezvose?Ndeapi mabasa emachira?Smart machira uye zvemagetsi zvemukati machira, vachiri vakavhiringidzika?... MAONERO MORE
Chii chinonzi Imwe Spandex Yakafukidzwa Yarn ?
Imwechete spandex yakafukidzwa yarn yakagadzirwa neDTY uye spandex ine tekinoroji yemhete spun. Izvo zvigadzirwa zvakagadzirwa kubva kune spandex yakafukidzwa yarn inonzwa kupfava.
Unemavara mangani iwe?
Tine makadhi edu eruvara, kana ruvara rwedu harukwanisi kuita chako chaunoda, Pantone zvakare inoshanda.
Ndeupi mazwi ako ekubhadhara?
T / T ( 30% Advance ; 70% usati warongedza mudziyo ; L / C pakuona.
Chii chako 'MOQ?
Yedu yenguva dzose yara muhomwe, isu hatina. Kune yarns isiri muhomwe, iyo MOQ iri 1.5 matani.
Isu tinowanzo wedzera mukati 24 kwapera maawa tawana kubvunza kwako. Kana iwe uri wekukurumidzira kuwana mutengo, ndapota fonera iwe kana tiudze mu email yako kuti isu titarise yako yekubvunza pekutanga.
Unoda rudzii rwetambo yesirika?